Search မြတ်ကေသီအောင် HD#gsc.tab=0 - GenFK.com
မိသားစုထဲမှာကိုယ်ကအရင်ထွက်သွားချင်တယ် မခံစားနိုင်လို့လေကိုယ်ကိုထားခဲ့မှာကိုမခံစားနိုင်ဘူး။အဖေနဲ့အမေအရင်ထွက်သွားနဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်တွေးတယ်သူတို့အရင်ထွက်သွားတာငါလုပ်ပေးနိုင်သေးတယ်ငါရှိတာကောင်းပါသေးတယ်လေလို့ တစ်ယောက်တည်းအချိန်ကြရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးစိတ်မကောင်းလို့အမေတို့အဖေတို့ပစ္စည်းတွေအကုန်သူများပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ မြတ်ကေသီအောင် Fashion Magazine Myanmar Myat Kay Thi Aung
30 Dec 2018 · 534K views
10 Aug 2018 · 446K views
“ဂန်တဝငျ အငွိုး” ရုပျရှငျ ဇာတျကား ရိုကျကှငျး။
ဒါရိုကျတာ အောငျဇျောလငျး ရိုကျကူး ပုံဖျောပွီး၊ မငျးဦး၊ ကြျောထကျအောငျ၊ မွတျကသေီအောငျ နှငျ့ ပိုငျဖွိုးသု တို့ အဓိကပါဝငျ သရုပျဆောငျနကွေတဲ့ “ဂန်တဝငျ အငွိုး” ရုပျရှငျ ဇာတျကား ရိုကျကှငျး။ Min Oo, Kyaw Htet Aung, Myat Kay Thi Aung and Paing Phyoe Thu star in "Ganawon A Nyoe" movie by director Kyaw Zaw Linn. #MinOo #MyatKayThiAung #KyawHtetAung #PaingPhyoeThu
15 Aug 2017 · 121K views
မြတ်ကေသီအောင် HD ဗီဒီယိုဖိုင်အသစ်
Myanmar TV and Top Entertainment
1 Jun 2020 · 1M views
Captain Tsubasa 2018 (Español) - Capitulo 12
Captain Tsubasa 2018 (Español) - Capitulo 12 Titulo: Wakabayashi está en problemas Sinopsis: ¡El partido final de las eliminatorias para representarala prefectura de Shizuoka entre el Nankatsu y el Shimizu empieza! Al escuchar que Wakabayashi sí podrá jugar en este partido, el Nankatsu se muestra más seguro para ganar. Sin embargo, el Shimizu juega con una sólida defensa al mismo tiempo que mantiene marcadoaTsubasa de una manera impecable, y el marcador se mantiene 0-0 en el primer tiempo. Para el segundo tiempo, el Shimizu mejora su marcaje sobre Tsubasa y logra reactivar la lesión de Wakabayashi con el fin de asegurar su victoria. Sin embargo, Tsubasa logra librarse del gran marcaje del Shimizu y consigue anotar un triplete que deja el marcador 3-0 para el final del partido. Luego de ganar las eliminatorias y clasificar para el Torneo Nacional, Tsubasa y el resto del equipo Nankatsu detectanaotro joven prodigio del fútbol llamado Jun Misugi, el capitán del equipo Musashi, quien está acompañado por una vieja amiga de Tsubasa llamada Yayoi Aoba. Comparte este video y Dale likeala pagina
14 Aug 2018 · 124K views